အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: weekend and ဘာဘာညာညာ
အခုစာရေးနေတဲ့ အချိန်က အင်္ဂါနေ့ည ၁၁ နာရီ ခွဲပါ။ မနေ့ကကော ဒီနေ့ ကော တီချမ်းတယောက် (ထုံးစံအတိုင်း) ရုံးမတက်ပါဘူး........နေမကောင်းလို့ပါ။ နေမကောင်းတာက ဗိုက်မကောင်းတာပါ။ ဗိုက်မကောင်းတဲ့ အကြောင်း က တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေကနေစပါတယ်။ အစကနေ စပြောပါမယ်။ ဖြည်းဖြည်းလာပါမယ် နားထောင်နော်။
Posted by တီချမ်း at 10:35 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အရွက်ကြော်, အသုပ်များ
စားစရာပို.စ်တပုဒ်ထဲတင် မှောင် အခါတဒါဇင်မကပါတယ်နော်၊ မှောင်..း-)
တီချမ်း February 8, 2012 at 11:04 AM
အို တို့က လှတယ်လေ မမြကျေးရယ် ငှဲငှဲ
T chan is in loveee....
Mon Petit Avatar February 8, 2012 at 5:42 PM
Whatacute couple, makes me smile every time!!!!
အမလေး ပါးစပ်မပိတ်ဘဲ စားနေသလား ထင်ရတယ်
lite pa tawdlin netdma yar:D
T Chan's face looks like full moon.You look weight gain.
​ကြော်ငြာဝင်ရလောက်အောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတာကိုး။ မျက်စိနဲ့ ပစ်မှားသွားတယ်။